Himalaya Dainik » नबराजकी प्रेमिकाको पेटमा ब’च्चा भन्ने साँचो कि झुटो ? कसरि बाहिरियो यस्तो कुरा ?(भिडियो)
उनले यो घट’नालाई पनि जातिय विभेदकै हो भन्ने बताएकी छन् । उनले युवती नवराज विकको घरमा पटक पटक गएर बसेको, नव’राजको परिवारले वुहारीको रुपमा स्वीकारी सकेको पनि देखिएको बताएकी छन् । नवराजको आमाले युवतीको पेट’मा बच्चा छ भनेर दावी गरेको विषयमा पनि उनले छानविन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले बारम्बार केटी नवराजको घरमा गएर बस्ने भएकाले नवराजको आमाले भनेको कुरामा सत्यता हुनसक्ने बताएकी छन् ।
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार २१:२७